musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Sudan Kupwanya Nhau » Russia inoda nzvimbo yegungwa muSudan, Sudan inoda mari
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Investments • nhau • vanhu • Russia Kuputsa Nhau • Sudan Kupwanya Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Sekureva kwemamwe marepoti, Sudan ikozvino inoda muripo wakakwira kwazvo wezvemari uye yakawedzerwa rubatsiro rwemari yeRussia yekubvumidza kumisikidzwa kwenzvimbo dzehondo dzeRussia pamhenderekedzo yeSudan.
Sudan neRussia dzakasaina chibvumirano chekuvhura Russian base navy base muSudan muna Zvita wa2020.
Nzvimbo yegungwa yemagetsi yakagadzirirwa kugadzirisa, kuzadza zvinhu uye nevashandi vezvikepe zveRussia kuti vazorore.
Ngarava dzehondo dzeRussia dzinopfuura mana dzinogona kugara panzvimbo yegungwa panguva, chibvumirano chekutanga chinotaura.
Mumiriri weRussia Anokosha weMutungamiriri weMiddle East ne Africa akazivisa kuti nhaurirano nyowani yakaitwa pakati pevakuru vemauto eRussia neSudan nezve kuvhura gungwa reRussia pamahombekombe eGungwa Dzvuku. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kweRussia vakatora chikamu muhurukuro nguva ino.
"Ivo (vakuru vezvekudzivirira) vakaita hurukuro uye mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa akashanyira ikoko," Mutevedzeri wegurukota rinowona nezvekunze Mikhail Bogdanov akadaro neMuvhuro, asina kuburitsa pachena kutaurirana.
Maererano nezvakataurwa kare, Russia uye Sudhani anga asaina chibvumirano chekumisikidza ruzha rwezvombo zveRussia muSudan kutanga kwaZvita wa2020.
Pasi pegwaro, vashandi vevashandi vengarava havafanirwe kupfuura vanhu mazana matatu.
Ngarava dzehondo dzeRussia dzinopfuura mana dzinogona kugara panzvimbo yegungwa panguva, gwaro rinotaura.
Chief of the General Staff weSudan Muhammad Othman al-Hussein akataura muna Chikumi kuti Sudan "iri mushishi yekudzokorora chibvumirano chakasainwa pakati peyaimbova hurumende yeSudan neRussia pachirongwa chemauto eRussia pamhenderekedzo yegungwa. Gungwa Dzvuku muSudan. ”